विराटनगरमा १० रुपैयामै टन्न पेटभरी राजमाको दाल र बासमतीको चामलकै खाना खानु पाईने,घर लागे २० रुपैया,विराटनगर कहाँ छ त्यस्तो ठाउँ हेर्नुहोस ? (भिडियो) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/विराटनगरमा १० रुपैयामै टन्न पेटभरी राजमाको दाल र बासमतीको चामलकै खाना खानु पाईने,घर लागे २० रुपैया,विराटनगर कहाँ छ त्यस्तो ठाउँ हेर्नुहोस ? (भिडियो)
विराटनगर, १४ पुष । विराटनगरमा १० रुपैयामै टन्न पेटभरी खाना खानु पाइन्छ भन्दा सायद जो कोहीलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। तर,यो वास्तविक हो। विराटनगरको काली मन्दिर अगाडी हरेक दिन ११ बजे १० रुपैयामै गत बुधबार देखि खाना वितरण गर्ने अभियान शुरु गरिएको छ । त्यहाँका स्थानीय समाजसेवीहरु मिलेर बुधबारदेखि शुरु यस्तो गज्जबको अभियान शुरु गरेका हुन् । यो अभियान सन्चालन गरेपछि खाना खाने मानिसहरुको भिड नै लागेको छ ।
दाल भातको गुणस्तर कम होला नि भन्ने सवालमा त्यस्तो कुनै कम नहुने समेत बताएका छन् । राजमाको दाल र बासमतीको चामलकै खाना दिने अभियानकर्ताले बताएका छन् । हरेक दिन फरक फरक तरकारीको स्वाद र जति खाए पनि थपी थपी दिने समेत गरेका बताएका छन् ।
त्यहि बसेर खानेलाई १० रुपैया,प्याकिङमा लैजानेहरुले भने २० रुपैया तिर्नुपर्दछ । एक पटक ५ सय जनालाई खाना खुवाउदा करिब १५ हजार रुपैया खर्च लाग्ने गरेको छ । १० र २० रुपैया तिरेर खाना खानेहरुबाट करिब ५ हजार रुपैया संकलन हुने र बाँकी १० हजार रुपैया आपसमा चन्दा उठाएर अभियान सञ्चालन गरिएको संयोजक धाडेवाले बताउनुभयो ।
यस अभियानले धेरै निम्न आयस्रोत भएका गरिब विपन्न सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्ने भएका छन्।
प्रेमिका डोली चढ्दा टुलुटुलु हेरिरहे बले ( भिडियो हेर्नुहोस् )
यो हो प्रधानमन्त्री ओलीको ‘जन्म घर’ – हेर्नुस् भिडियो
रविको भिसा नलाग्दा खुशी थिईन रन्जना: रविलाई म्यासेजमा लेखेको प्रमाण देखाउँदै रञ्जनाको ससुरा (भिडियो सहित)